Beesha Silcis Gorgaate oo kulan degdeg ah ku yeelatay magaalada Muqdisho - Latest News Updates
Beesha Silcis Gorgaate oo kulan degdeg ah ku yeelatay magaalada Muqdisho
Magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay kulan ballaaran oo ay ka soo qeyb galeen waxgaradka, odayaasha dhaqanka, culumaa’udiinka, dhallinyarada iyo haweenka ka soo jeeda beesha Silcis Gorgaate, iyadoo ujeedada kulankaasina looga hadlay qodobo dhowr ah iyo sidii ay uga tashan lahaayeen dhibaatooyin kala duwan.
Ugu horeyn waxaa halkaasi khudbad ka jeediyay qaar ka mid ah xubnaha ka qeyb galay kulanka, iyagoona siyaabo kala duwan uga hadlay muhiimadda uu kulankani u leeyahay waxayna tilmaameen inay xooga saarayaan midnimada beesha Silcis ee ku sugan dalka gudihiisa iyo dibadiisa.
C/qaadir Sheekh Ibraahim oo ka mid ah qabanqaabiyeyaasha kulanka ayaa khudbadiisa waxa uu uga hadlay taariikhda faca weyn ee ay leedahay beesha Silcis Gorgaate, wuxuuna sheegay inay taageersan yihiin Dowladda Federaalka isla markaana kulankoodu uu yahay isu tagga iyo midnimada beesha Silcis Gorgaate.
“Waxaan sheegeynaa inaan nahay dad ku caan baxay nabadgelyada oo mudadii dalku burbursanaana aan dhigaan isbaaro sida beelaha kale ee ku caan baxay isbaarooyinka” ayuu yiri C/qaadir Sheekh Ibraahim oo sheegay in ujeedada kulankooda uu yahay sidii ay u heli lahaayeen xuquuqda uga maqan Dowladda Federaalka.
Dhinaca kale C/qaadir Sheekh ayaa ku dhaliilay Xildhibaan Cali Ganey oo ka soo jeeda beesha Silcis inuu ku takri falay doorkii ay ku lahaayeen dowladda Federaalka, isagoona ku eedeeyay in Xildhibaan Cali Ganey uu iibsaday kursigii beesha Silcis ku lahayd maamulka K/Galbeed, wuxuuna sidoo kale iibsaday xubin sarkaalnimo oo saami ahaan ay lahayd beesha, isagoo ka iibsaday shaqsi aan beesha u dhalan balse magaceeda uu ku qaatay.
“Waxaa ayaan darro ah in Xildhibaan Cali Ganey saddex wiil oo walaalo hal oday isku dhalay lacag uga qaatay sidii looga shaqaaleysiin lahaa qeybta Dab-damiska ee maamulka Gobolka Banaadir, waxaana ugu baaqayaa beesha Silcis inay go’aan ka qaataan falalka guracan ee uu sameynayo” ayuu yiri mar kale C/qaadir Sheekh Cali oo ku booriyay ka qeyb galayaasha kulankaasi in si degdeg ah looga hortago tallaabo kasta oo lagu wiiqayo horumarka iyo danaha beesha Silcis.
Guddoomiyaha guddiga golaha dhallinyarada beesha Silcis Ramxo Maxamuud Axmed oo halkaasi ka jeedisay khudbad kooban ayaa sharaxaad ka bixisay howlaha culus ee horyaala guddigooda sidii ay gun gaari lahaayeen yoolka ay hiigsanayaan, waxayna tilmaantay in guusha lagu gaarayo isku duubnida beesha Silcis.
Waxaa kale oo mudadii uu kulanka socday qadka isgaarsiinta kaga qeyb qaatay xubno matalayay qurba-joogta beesha Silcis Gorgaate, iyagoo sheegay inay taageero hiil iyo hooba leh la garab taagan yihiin barnaamijka isu tagga ururka dhallinyarada beesha Silcis, waxayna hoosta ka xariiqeen in tallaabadan kor u qaadeyso horumarka beesha dhexdeeda.